နေ့စွဲ : 2021-01-18
လတ်တလော ကျော်ြကားသောအရာများ : 55
SSK Editor Yeni Serum Mist Review
Agerin Essence Mist 33,900 ks > 19,900 ks + Mask Gift
Amipure Amino Effect Serum Mist 36,000 ks > 28,900 ks
Annyeong ~ SSK Lovelies တို့ရေ!! Editor Yeni ဖြစ်ပါတယ် ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Yeni က Serum Mist Review လေးနဲ့အတူ ပြန်လာပါပြီ အခု နာမည်လေးကြားရုံနဲ့တင် Serum Mist ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာ အရမ်းသိချင်နေကြပြီဟုတ်?? ပြီးတော့ ပုံမှန် သုံးနေကျ Mist နဲ့ဘယ်လိုကွာလဲဆိုတာလည်း သိချင်ကြမှာပဲနော်
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ အဓိကကျတဲ့ point လေးက mist ဆိုတာ ဒီအတိုင်း ရေတွေပဲပါတဲ့ product မဟုတ်ပါဘူးနော်~ Serum/ Essence လိုမျိုးပဲ အသုံးပြုလို့ရနိုင်တဲ့ product လေးတွေပါ ပြီးတော့ spray type လည်းဖြစ်တာကြောင့် လွယ်လွယ်ကူကူ သုံးလို့ရပြီး skin condition အလိုက် အချိန်မရွေး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Seoul Startup Hub ကနေတစ်ဆင့် Serum Mist (2) မျိုး ရောက်လာပါတယ်ရှင့် !! AGERIN Intense Brightening Essence Mist နဲ့ AMIPURE Amino Effect Serum Mist လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်
AGERIN Intense Brightening Essence Mist:
ဒီ Serum Mist လေးကတော့ Sensitive Skin တွေအတွက် Skin barrier ခိုင်ခံ့ဖို့ အရမ်းအရမ်းကိုကောင်းတဲ့ Mist လေးပါ ageratum houstonianum extract လို့ခေါ်တဲ့ ခရမ်းရောင်ပန်းအဆီအနှစ်ကနေ ထုတ်လုပ်ထားတာမို့ အသားအရည်ကို repair ပြန်လုပ်ပေးပြီး ပိုမိုကျန်းမာစိုပြေလာအောင် ပြုလုပ်ပေးပါတယ် Yeni ကိုယ်တိုင် တစ်ဘူးဝယ်ပြီး သုံးကြည့်ခဲ့ပြီးပြီနော် Yeni ကလည်း sensitive skin ဆိုတော့ ဒီ Agerin Mist လေးကို နည်းမှန်လမ်းမှန်နဲ့ သေချာ try ကြည့်လိုက်တော့ sensitive ဖြစ်တာလျော့သွားတာ လုံးဝ အသိအသာပဲ !!
AMIPURE Amino Effect Serum Mist:
Amipure Serum Mist လေးကကျ ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်လို့ အဆီပြန်တဲ့အသားအရည်အတွက် လုံးဝ recommend ပေးပါတယ် အသားအရည်အတွက် လိုအပ်တဲ့အစိုဓာတ်ကို အပြည့်ဖြည့်ပေးတာကြောင့် oily ဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်မျိုး လုံးဝမရှိဘူးနော် ရှယ်ပဲ ပြီးတော့ spray ကလည်း မြူလိုမျိုး အမှုန်ဖွာတာများတဲ့အတွက် သုံးရတာလည်းကောင်းပါတယ် အခုမှ Serum Mist သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ Amipure Serum Mist လေးကပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်ရှင့်
ဒီ product နှစ်ခုလုံး Brightening & Glow Skin Effect ရှိတာကြောင့် ကိုယ့်အသားအရည်အမျိုးအစားနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ serum mist လေးကိုရွေးချယ်ဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေနော် serum mist လေးအကြောင်းပိုပြီး စပ်စုချင်ရင်တော့ Facebook messenger က မင်မင်တွေကို အချိန်မရွေးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင့်